မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင် Dopamine ၏အခန်းကဏ္Imကိုပုံဖော်ခြင်း (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Dopamine ၏မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအခန်းကဏ္ကိုပုံဖော်ခြင်း (၂၀၀၉)
မှတ်ချက်များ - စွဲစွဲမှု၌ dopamine ၏အခန်းကဏ္ of နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်ခု။ Volkow သည်စွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NIDA ၏အကြီးအကဲဖြစ်သည်။
Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 3-8 ။
2008 ဇွန်3အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2008.05.022
အဲန်ဒီ Volkow,* JS မုဆိုး, GJ ဝမ်, R. Balerနှင့် အက်ဖ် Telang
Dopamine မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ပါဝင်ပတ်သက်ပေမယ့်စွဲလမ်းအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် dopamine ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြောင်းပေပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုဖော်ပြရန်။ လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုဇီဝကမ္မ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အားဖြင့်သွေးဆောင်သူတို့အားတူတဲ့ပေမယ့်ပိုပြီးပြင်းထန်ခြင်းနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော extracellular dopamine အတွက်ကြီးမားသောနှင့်အစာရှောင်ခြင်းတိုး, နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ dopamine ဆဲလ်လှုံ့ဆော်မှုအဓိကတုန့်ပြန်ပစ်ခတ်, မူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြင့် supraphysiological activation (အာရုံစူးစိုက်မှု, arousal, အေးစက်သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုကားမောင်း) အလွန်အမင်းအဓိကအဖြစ်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်ကတည်းကများနှင့်အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူ dopamine ဆဲလ် activation နှင့်အချက်ပြဘို့လိုအပ်တံခါးမြှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု dopamine D2 receptors နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျှောက်လျော့နည်းမှတ်သားခဲ့ကြဖော်ပြသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက် (နှင့် prefrontal cortex dorsolateral;, (Impulse အတွက်၎င်း၏ပြတ်တောက်ရလဒ်များကို inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်) cingulate gyrus; dopamine function ကို၌ဤကျဆင်းခြင်း (compulsive အပြုအမူတွေအတွက်၎င်း၏ပြတ်တောက်ရလဒ်များကို salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်) orbitofrontal cortex အတွက်လျှော့ဒေသဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ် function ကို; ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ရပ်တွေ၏ချို့ယွင်းစည်းမျဉ်းအတွက်၎င်း၏ပြတ်တောက်ရလဒ်များကို) ။ အပြိုင်ခုနှစ်, မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်အစပျိုးအေးစက်ပြီးတော့ prefrontal နှင့် striatal ဒေသ activation နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်မူးယစ်ဆေးရယူဖို့ဖို့လှုံ့ဆျောမှုမောင်းနှင်ရသော Conditions တွေကိုထိတွေ့တဲ့အခါမှာအချက်ပြတိုးမြှင် dopamine, စေပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် prefrontal နှင့် striatal ထိန်းချုပ်မှုလျှော့-in ကိုထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စွဲလူတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးကြာသို့မဟုတ် Conditions တွေကိုထိတွေ့သောအခါရလဒ်များကြောင့် compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်အတူ dopamine လှုပ်ရှားမှု-လက်မှတ်ရေးထိုးအတွက်လိုငွေပြမှု ဆက်စပ်. အ။ စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လျော့နည်းသွား dopamine function ကိုသဘာဝစစ်ကူဖို့သူတို့ရဲ့ sensitivity ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ cortical projection ဒေသဦးနှောက် dopaminergic သေံနှင့်လှုပ်ရှားမှု restore ပြန်ရည်ရွယ်ကုထုံးကြားဝင်, prefrontal function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့် Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စွဲလူတစ်ဦးလှုံ့ဆျောကူညီပေးနေစဉ် Impulse နှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ဘူး။
keywords: Positron ထုတ်လွှတ် tomography, Orbitofrontal cortex, Cingulate gyrus, Dorsolateral prefrontal cortex, Dopamine D2 receptors, ဆုကြေး, ဓာတ်, Salience, Raclopride, Fluoro-deoxyglucose
(နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်; NAc) limbic ဒေသများတွင် extracellular dopamine (DA) တွင်အလွဲသုံးစားမှုခလုတ်ကြီးမားသောတိုး၏မူးယစ်ဆေးဝါး (di Chiara နှင့် Imperato, 1988; Koob နှင့် Bloom, 1988), အရာကသူတို့ရဲ့အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုများ DA (phasic DA ဆဲလ် saliency များအတွက် coding ထဲမှာဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍကြောင်းပစ်ခတ်ရန်နှင့်ဆုလာဘ်မှအလယ်တန်းတိုးပွါးတူတဲ့ပေမယ့်ကျော်ဖြတ်Schultz et al ။ , 2000) ။ အချို့သောတိရစ္ဆာန်အလေ့လာမှုများ NAc အတွက် DA တိုး (ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောမှအတိုင်းအတာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသော်လည်းDrevets et al ။ , 2001; နေ့ et al ။ , 2007), လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (() ဟာ NAc တည်ရှိရာ ventral striatum, အပါအဝင် striatum အတွက် DA အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တိုးဆုလာဘ် (မြင့်သော Euphoria ပီတိ) ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ descriptor များကိုအတူဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းပြသကြ Volkow et al ။ , 1996a; Drevets et al ။ , 2001) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, က DA ဆဲလ်များ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းရုံ (ဆုချမပေးဝှက်ကြောင်းကိုလည်းထင်ရှား၏Tobler et al ။ , 2007) နှင့်ဆုလာဘ်များမျှော်မှန်း (Volkow et al ။ , 2003b) ဒါပေမယ့်လည်း saliency ပေးထားသောအဖြစ်အပျက်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု (၏Rolls et al ။ , 1984; Williams က et al ။ , 1993; Horvitz, 2000; Zink et al ။ , 2003) ။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ saliency (၎င်း၏ unexpectedness နေဖြင့်၎င်း၏အသစ်အဆန်း၎င်း၏ conditional မျှော်လင့်ချက်များသို့မဟုတ်ယင်း၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (အပြုသဘောအဖြစ်အပျက်သဘော) ဖြစ်စေမောင်းနှင်နေသည်Volkow et al ။ , 2003, 2006b) ။ မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းမှ concomitant DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်လည်းမူးယစ်ဆေးနဲ့ချိတ်ဆက်မှတ်ဉာဏ်ခြေရာတွေ၏စုစည်းပြီးလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကား, အလှည့်အတွက်, (အကျိုးကိုမြျှော) သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်လှုံ့ဆော်မှုမှအနာဂတ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူပစ်ခတ် DA ဆဲလ်တွေဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ် (Waelti et al ။ , 2001) ။ သောကြောင့်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် DA ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ, မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးသူ့ဟာသူနှင့်အတူဆက်စပ် DA တိုးကိုလည်း (ထိုဆုလာဘ်ရယူဖို့ဖို့လှုံ့ဆျောမှု modulate ဖို့များပါတယ်လူယာ et al ။ , 2003).
အားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် DA ၏မျိုးစုံအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. သိကျွမ်းခြင်း၌အသီးအနှံကိုမူးယစ်ဆေးစွဲပိုမိုရှုပ်ထွေးမော်ဒယ်များမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာလက်ရှိမူလကပင်မသက်ဆိုင်မူးယစ်ဆေးသတိရှိရှိပျြောမှေ့စသို့မဟုတ်မအဖြစ်ကိုရိပ်မိနေသည်ရှိမရှိပိုပြီးမူးယစ် (၏ဝယ်ယူရေးလှုံ့ဆျောပေးမညျဖွစျကွောငျးကိုသူတို့ပျြောမှေ့စကားကြောင့်၎င်း, DA တိုးပွားလာအသုံးပြုပုံသူတို့အဓိကလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်လုပ်ဆောင်နေပါသည်ရုံဘာလို့လဲဆိုတော့မူးယစ်ဆေးမဟုတ်အားဖြည့်နေကြသည်ဟုယုံကြည်နေသည် ) ။
ဦးနှောက်ပုံရိပ်နည်းစနစ်အသစ်ဥာဏ်ကိုအလွန်လှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။ သူတို့က (ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ neurochemical နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များကိုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီVolkow et al ။ , 1997a), အလွဲသုံးစားမှုနဲ့သူတို့ရဲ့အမူအကျင့်ဆက်စပ်မှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင် DA အတွက်အပြောင်းအလဲများကို၏သဘောသဘာဝစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးအတွက်ပလပ်စတစ်ဦးနှောက် DA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်၎င်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များကိုလေ့လာမှဘာသာရပ်များစွဲ။ ဤစာတမ်းသည်သက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်တစ်ခု updated ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးစွမ်းသည်။
2 ။ လူ့ဦးနှောက်နှင့်အားဖြည့်အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် dopamine တိုး
အဆိုပါ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် D2 DA အဲဒီ receptor radioligands (ဥပမာ [11ကို C] raclopride [18F]N-methylspiroperidol) DA နဲ့လူ့ဦးနှောက်အတွက်၎င်း၏အားဖြည့် (ဆိုလိုသည်မှာ euphorigenic, High-inducing, မူးယစ်ဆေး-like) သက်ရောက်မှု modulate တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့စွမ်းရည်အကြားဆက်ဆံရေး၏လေ့လာမှုအဘို့အတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသက်သေပြခဲ့သည်။ အဆိုပါချဉ်းကပ်မှု (ထိုလှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဆိုလိုသည်မှာ methylphenidate, စိတ်ကြွဆေး, ကိုကင်း) ၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်နီကိုတင်း၏သူတို့အားအကဲဖြတ်ရန်ထိရောက်စွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးBarrett et al ။ , 2004; Brody et al ။ , 2004; Montgomery et al ။ , 2007; Takahashi et al ။ , 2007) ။ ကိုကင်းကဲ့သို့စိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့ပုကနေဖြန့်ချိခြင်းဖြင့် DA တိုးပွါးရာ, (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg) DA ပို့ဆောင်ရေး (DAT) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စိတ်ကြွဆေး၏ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် DA တိုးပွါးပေးသော methylphenidate ၏သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်ရေး (0.3 / ကီလိုဂရမ် mg), နှစ်ဦးစလုံး DAT မှတဆင့် terminal ကို, striatum နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတိုးအတွက် extracellular DA အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့် ( "မြင့်သော" ၏ Self-အစီရင်ခံစာများနှင့် "Euphoria ပီတိ" နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်Hemby et al ။ , 1997; Villemagne et al ။ , 1999) ။ (စိတ်ဝင်စားစရာနှုတ်အုပ်ချုပ် methylphenidate (0.75-1 / ကီလိုဂရမ် mg) ကိုလည်း DA တိုးလာပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်အားဖြည့်အဖြစ်ကိုရိပ်မိသည်မဟုတ်Chait, 1994; Volkow et al ။ , 2001b) ။ သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်ရေးပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးနှေးကွေးစွာပါးစပ် methylphenidate-သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး (နှင့်အတူ "မြင့်သော" စောငျ့ရှောကျဖို့ပျက်ကွက် DA တိုးပွါးသော်လည်း DA ပြောင်းလဲမှုများကိုအစာရှောငျဖို့ဦးဆောင်ကတည်းကကျိုးပဲ့လျက် et al ။ , 2007) (အနှေး pharmacokinetics ထင်ဟပ်ဖွယ်ရှိ -isParasrampuria et al ။ , 2007) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဦးနှောက်က၎င်း၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်စေမယ့် key ကို parameter သည် (အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးရိုက်ထည့်ထားတဲ့မှာအမှန်စင်စစ်အမြန်နှုန်းBalster နှင့် Schuster, 1973; Volkow et al ။ , 1995, 2000) ။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဦးနှောက်လွှာမှ၏အလားတူအရမ်းမြန်နှုန်းကိုရှိပါတယ်ရာဆေးလိပ်သောက်ပြီးနောက်သွေးဆောင် ventral striatum အတွက် DA တိုးလည်း (၎င်း၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Brody et al ။ , 2004).
ဦး နှောက်ကိုလျင်မြန်စွာစားသုံးခြင်း (DA အမြန်ပြောင်းလဲခြင်းဆီသို့ ဦး တည်ခြင်း) နှင့်ပေးထားသောမူးယစ်ဆေးဝါး၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအကြားဆက်စပ်မှုသည် phasic DA ပစ်ခတ်ခြင်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဖော်ပြသည်။ phasic လွှတ်ပေးမှုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အမြန်ပေါက်ကွဲမှု (> 30 Hz) က DA level မှာရုတ်တရက်အတက်အကျဖြစ်ပေါ်စေပြီးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုရဲ့ထူးခြားမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ဖို့ကူညီသည်။တော်ကကျေးဇူး, 2000) ။ ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားဟာ DA system ရဲ့တုန့်ပြန်တံခါးခုံကိုသတ်မှတ်ထားသောအခြေခံတည်ငြိမ်-ပြည်နယ် DA အဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သည့် (5 Hz န်းကျင်၏နှေးကွေးကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ) ပစ်ခတ် DA ဆဲလ်, လုပ်သူများမှမတူဘဲဆိုလိုတာပါ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတူတဲ့ကြောင်း DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းပေမယ့်ကိုအလွန်ကျော်လွန်, ဖြစ်စဉ် phasic DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်ထုတ်လုပ်သူတို့အားစီမံခန့်ခွဲကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကုထုံးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်သည့်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေး, ပစ်ခတ်လုပ်သူများ DA ဆဲလ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်သောသူတို့အား (ဆင်တူကြောင်းနှေးကွေး DA အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းဖွယ်ရှိသည်Volkow နှင့် Swanson, 2003) ။ လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ DA ဖယ်ရှားရေးအတွက်အဓိကယန္တရား (နေသော DATs, ပိတ်ဆို့သောကြောင့်ဝီလျံနှင့် Galli, 2006ပေးထားသည့်အခါ), သူတို့ကပင်နိုင်) အခြားစစ်ကူ (သဘာဝသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တွေရဲ့အားဖြည့်တန်ဖိုးကိုနှုတ်-တိုးမြှင့် (Volkow et al ။ , 2001b) ။ အလားတူပင် DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရာနီကိုတင်း, အစကတွဲထားတဲ့နှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှုများအားဖြည့်တန်ဖိုးကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌သဘာဝဆုလာဘ်နှင့်အတူနီကိုတင်း၏ပေါင်းစပ် inextricably ယင်း၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်လာသည်။
3 ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ DA အပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် dopamine ၏အခန်းက္ပ: စွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှု
DA အတွက် Synaptic တိုးနှစ်ဦးစလုံးစွဲအဖြစ် Non-စွဲဘာသာရပ်များ (မူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်di Chiara နှင့် Imperato, 1988; Koob နှင့် Bloom, 1988) ။ သို့သော်ထိတွေ့သာလူနည်းစုမူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားတစ်ခု function ကိုဖြစ်ခြင်းဘာသာရပ်များ-အမှန်တကယ်အချိုးအစားကိုအသုံးပြုစဉ် (မူးယစ်ဆေးယူပြီးဆက်လက်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော drive ကိုဖွံ့ဖြိုးSchuh et al ။ , 1996) ။ ဒါကတစ်ယောက်တည်းစူးရှသောမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် DA တိုးစွဲ၏လူအများကဖှံ့ဖွိုးတိုးတရှင်းပြလို့မရပါဘူးကြောင်းဖော်ပြသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးလိုအပ်ပါတယ်သောကြောင့်, ဒါဟာဆုလာဘ် / saliency, လှုံ့ဆျောမှု / drive ကို, inhibitory ထိန်းချုပ်မှု / အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့်မှတ်ဉာဏ် / အေးစက်အတွက် neuro-အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထွက်လာပါတယ်, အမြစ်တွယ်-in ကိုခံရဖို့အားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီ-အတွက် DA စနစ်၏ထပ်ခါတလဲလဲထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းဖွယ်ရှိသည် dopaminergic လမ်းကြောင်းအားဖြင့် modulated နေကြသည်အားလုံးသည့်ဆားကစ်, (Volkow et al ။ , 2003a).
အတွေး၏ဤလိုင်းနှင့်အတူတသမတ်တည်း, စိတ်ကြွဆေးမှထိတွေ့မှု, နီကိုတင်း, ဒါမှမဟုတ် opiates မြဲသပ္ပါယ်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူဦးနှောက်၏သော့ချက်ဒေသများရှိဆဲလ်အပေါ် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအပြောင်းအလဲဆုလာဘ်, တရားသဖြင့်စီရင်ထုတ်လုပ်နှင့် mounting သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် အပြုအမူများ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှု (Robinson နဲ့ Kolb, 2004) ။ ဥပမာအားဖြင့်, DA အဲဒီ receptor အချက်ပြများတွင်နာတာရှည်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် (Synaptic plasticity ကိုထိခိုက်ဖို့အလားအလာနှင့်အတူအစားထိုးအချိုမှု receptor တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဝံပုလွေ et al ။ , 2003) ။ အမှန်မှာကြောင်း DA (ဝံပုလွေ et al ။ , 2003; လျူ et al ။ , 2005), ဒါပေမယ့်လည်းအချိုမှု, ဂါဘမြို့သားများနှင့်အခြား neurotransmitters, ရှိသမျှ Synaptic plasticity ၏အလွန်အမင်းစွယ်စုံ modulator တွေကိုဖြစ်ကြသည်အကျိုးကိုစင်တာအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းများစွာသောအခြားဆားကစ်ထဲမှာမသာ, အသပ္ပါယ်ကိုပြောင်းလဲအတူအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုကိုဆက်သွယ်ထားသောတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကိုဆွဲယူ, အင်အားခိုင်မာ, ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် synapses ၏ဖျက်သိမ်းရေးမှတဆင့်။
အကွိမျမြားစှာ radiotracers (လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ DA ကွန်ယက်အတွင်းပစ်မှတ်ပြောင်းလဲမှုများဤအမျိုးအစားများကို detect နှင့်တိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့ကြစားပွဲတင် 1) ။ [အသုံးပြုခြင်း18F]N-methylspiroperidol သို့မဟုတ် [11ကို C] raclopride ကျွန်တော်နှင့်အခြားသူများ (Martinez et al ။ , 2004, 2005, 2007) (မူးယစ်ဆေးဝါးကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး (ကိုကင်း, ဘိန်းဖြူ, အရက်နှင့်စိတ်ကြွဆေး) စွဲဘာသာရပ်များ, အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး detoxification ပြီးနောက်လအတွင်းဆက်လက်ရှိကြောင်း ventral striatum အပါအဝင် striatum () ထဲမှာ D2 DA အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချပြကြောင်းပြသကြVolkow et al ။ , 2007a) ။ အလားတူတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းမကြာသေးမီကနီကိုတင်းမှီခိုဘာသာရပ်များ (အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်Fehr et al ။ , 2008).
ယင်းအုပ်စုများအကြားကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရာအဘို့ဥစ္စာချိုးဖောက်မှုများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအကြား DA neurotransmission တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးမျိုးသောပစ်မှတ်နှိုင်းယှဉ်ပေတွေ့ရှိချက်များ၏အနှစ်ချုပ်
ဒါဟာ [သွေးကြောသွင်း methylphenidate သို့မဟုတ်သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင် DA အတွက် striatal တိုး (နှင့်အတူအကဲဖြတ်သောဤအခြေအနေတွင်ထောက်ပြဖို့လည်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်11ကို C] raclopride) ကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများနှင့်အရက်သမားအတွက်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (ထက်မှာအနည်းဆုံး 50% နိမ့်များမှာVolkow et al ။ , 1997b; Martinez et al ။ , 2007) ။ methylphenidate အားဖြင့်သွေးဆောင် DA တိုး DA ဆဲလ်၏ DA လွှတ်ပေးရန်-function တစ်ခုပေါ်မှာမှီခိုနေကြကတည်းကပစ်ခတ်ရန်-ကခြားနားချက်ဖွယ်ရှိသည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်လျော့နည်းသွား DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုထင်ဟပ်ကြောင်း hypothesize မှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
ဒါဟာ [ပေလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုပြုဆိုတာကိုသတိရဖို့ကအရေးကြီးတယ်11endogenous DA နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့အထိခိုက်မခံသောအရာကို C] raclopride, မျှသာအဆိုပါ tracer မှခညျြနှောငျမှရရှိနိုင်လစ်လပ် D2 DA receptors တစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိပါတယ်။ အတူတိုင်းတာအဖြစ် D2 DA အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်ထို့ကြောင့်မည်သည့်လျှော့ချရေး [11ကို C] raclopride ဖြစ်စေရောင်ပြန်ဟပ် [အတူ binding များအတွက်ယှဉ်ပြိုင် (D2 DA receptors နှင့် / သို့မဟုတ် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုး၏အဆင့်ဆင့်အတွက်လျော့နည်းစေနိုင်ကြောင်း11ကို C] NAc အပါအဝင် striatum အတွက် D2 receptors များအတွက် raclopride) () ။ သို့သော်ကြောင်းပေးထားဃအမတ်တိကျတဲ့ binding အတွက်တုံးလျှော့ချပြသသည့်အခါကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများ (များ၏ညွှန်ပြ DA လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းသွား) ဆိုတဲ့အချက်ကိုကင်းချိုးဖောက် D2 receptors တွေရဲ့အဆင့်ဆင့်အတွက်လျော့ချရေးအဖြစ် striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကျဆင်းခြင်းနှစ်ဦးစလုံးလည်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို (သဘာဝစစ်ကူစွဲဘာသာရပ်များအတွက်လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုVolkow et al ။ , 2002b) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသဘာဝစစ်ကူထက် DA-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဆုလာဘ်ဆားကစ်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့မှာပိုပြီးအစွမ်းထက်ကြောင့်, မူးယစ်ဆေးဝါးနေဆဲစိတ်ဓာတ်ဆုလာဘ်ဆားကစ်ကိုသက်ဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အခြားလက်ဖြစ်နိုင်သည်ယာယီသည်ဤဆုလာဘ်ဆားကစ်ကိုသက်ဝင်ဖို့နည်းလမ်းအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဆွရှာကြံများအတွက်ဘာသာရပ်များ predisposing, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လျှော့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပေါ် sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ အချိန်တွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဒီအပြုအမူများ၏နာတာရှည်သဘာဝပဲပုံမှန်ခံစားရရန်သူတို့ကိုယူပြီးဖို့ "မြင့်သော" ခံစားနိုင်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးထံမှအကူးအပြောင်းကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။
dopaminergic ချိန်ခွင်လျှာထိုသို့သောရေရှည်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့် functional ဆက်စပ်မှုဘာတွေလဲ? အဆိုပါ PET radiotracer အသုံးပြုခြင်း [18ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်တိုင်းတာကြောင်းက F] fluoro-deoxyglucose (FDG), ကျနော်တို့နှင့်အခြားသူများ cingulate gyrus (CG), orbitofrontal cortex (OFC) တွင်လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုပြခဲ့ကြပြီးစွဲဘာသာရပ်များ (အရက်သမား, ကိုကင်းချိုးဖောက် prefrontal cortex (DLPFC) dorsolateral, marihuana အလွဲသုံးစားပြုသူများ) (လန်ဒန် et al ။ , 1990; Galynker et al ။ , 2000; Ersche et al ။ , 2006; Volkow et al ။ , 2007a) ။ ထို့အပွငျကိုကင်းအတွက် (Volkow နှင့်မုဆိုး, 2000) နှင့်စိတ်ကြွဆေး (Volkowet အယ်လ်။ , 2001a) (ဘာသာရပ်များစွဲနှင့်အရက်သမားအတွက်Volkow et al ။ , 2007d), ကျနော်တို့ (ကိုတွေ့မြင် OFC, CG နှင့် DLPFC အတွက်လျှော့လှုပ်ရှားမှု striatum အတွက် D2 DA receptors ၏လျော့နည်းသွားရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသကြ သဖန်းသီး။ 1 ကိုကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးရလဒ်များအတွက်) ။ အဆိုပါ OFC, CG နှင့် DLPFC inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ကတည်းက (စတိန်းနှင့် Volkow, 2002) နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အတူ (ဖန် et al ။ , 2002), ကျနော်တို့စွဲဘာသာရပ်များအတွက် DA နေဖြင့်၎င်းတို့၏ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့စည်းမျဉ်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်၎င်းတို့၏ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-စည်းမျဉ်းများကသူတို့အရှုံးအခြေခံနိုင်ကြောင်း postulated ခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ် (အရက်သမားအတွက် ventral striatum အတွက် D2 DA အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်လျှော့ချအရက်သေစာတဏှာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူနှင့် medial prefrontal cortex ပိုမို cue-သွေးဆောင် activation နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြခဲ့ကြခြင်းနှင့် fMRI နှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ်, CG anteriorHeinz et al ။ , 2004) ။ ထို့အပြင်, (perseverative အပြုအမူတွေအတွက် OFC ရလဒ်များကိုမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့Rolls, 2000) ကတညျးလူသားတွေအတွက် OFC နှင့် CG အတွက်ချို့ယွင်း (obsessive compulsive အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်Saxena က et al ။ , 2002) -we လည်း (ဤဒေသများ DA ချို့ယွင်းစွဲရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သော compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအခြေခံနိုင်ကြောင်း postulated ပါပြီVolkow et al ။ , 2005).
(က) ၏ပုံမှန်အသံအတိုးအကျယ်ဖြန့်ဖြူး [11ကို C] ကိုကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များ၏ striatum အတွက် binding raclopride ။ DA အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု၏ (ခ) ညမညသဘောတရား (Bmax ကို/Kd) ဇီဝဖြစ်စဉ်၏အတိုင်းအတာနှင့်အတူ striatum အတွက် ...
သို့သော်အသင်းအဖွဲ့လည်း prefrontal ဒေသများတွင်ချို့ယွင်းလှုပ်ရှားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အန္တရာယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီကိုထားနှင့်သာထို့နောက်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု D2 DA receptors ၏ downregulation ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြဘတ်နိုင်။
DA လည်း (ယင်း hippocampus, amygdala နှင့် dorsal striatum ရဲ့လှုပ်ရှားမှု modulates မှတ်ဉာဏ်နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဒေသများဖြစ်ကြသည်သောအေးစက်နှင့်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးVolkow et al ။ , 2002a) ။ ထို့အပြင်ဤဒေသများတွင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု preclinical မော်ဒယ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြKauer နှင့် Malenka, 2007) ။ အမှန်စင်စစ်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအတွက်ဆီလျော်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုယန္တရားများ၏ဖွယ်ရှိပါဝင်ပတ်သက်မှု၏တိုးမြှင့်အသိအမှတ်ပြု (ရှိVanderschuren နှင့် Everitt, 2005) ။ မှတ်ဉာဏ်စနစ်များအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုကြားနေလှုံ့ဆော်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience-ကြောင်းအေးစက်-မက်လုံးပေးသင်ယူမှုမှတဆင့်ဖြစ်ပါသည်အားဖြည့်ဆည်းပူးနိုင်သောနည်းလမ်းများကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးသူတို့ကမူးယစ်ဆေးယူကြပြီနေရာများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါဘာသာရပ်များကြိုတင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ခဲ့သောနှင့်အတူလူများတို့အားနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့အသုံးပြု paraphernalia ငှါ, မူးယစ်ဆေးတစ်ခုပြင်းထန်သောဆန္ဒတွေ့ကြုံခံစားစွဲအဘယ်ကြောင့် relapse အပေါ်သုတေသနမှာ, နားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ခဲ့ မူးယစ်ဆေး။ ဒီအခွအေနမြေားတွေကိုထိတွေ့ကတည်းကဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ် (ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကိုချိတ်ဆက်) relapse ဖို့ key ကိုပံ့ပိုးသည်။ DA (ဆုလာဘ်များခန့်မှန်းအတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကSchultz, 2002), DA တဏှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအေးစက်တုံ့ပြန်မှုအခြေခံမှခန့်မှန်းထားသည်။ Preclinical လေ့လာမှုများဒီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့: ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူတွဲကြသောအခါ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထပ်ခါတလဲလဲ-နှင့်အတူမည်ယခုအေးစက် cue ထိတွေ့သည့်အခါ NAc အတွက် DA နှင့် dorsal striatum တိုးမြှင့်ဖို့စွမ်းရည်အသင်းအဖွဲ့များ-ဆည်းပူး။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆဤ neurochemical တုံ့ပြန်မှု (မူးယစ်ရှာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့တွေ့ပါပြီVanderschuren နှင့် Everitt, 2005).
[အတူလူသားများ, PET လေ့လာမှုများအတွက်11ကို C] raclopride မကြာသေးမီကကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများကမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုအတွက် (ကိုကင်းတာဘာသာရပ်များ၏မြင်ကွင်းများ၏ကင်း-cue ဗီဒီယို) သိသိသာသာ dorsal striatum အတွက် DA တိုးလာ, ဤတိုးလည်း (ကိုကင်းတဏှာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံဒီယူဆချက်ကိုအတည်ပြုVolkow et al ။ , 2006c; Wong က et al ။ , 2006) တစ်ဦး cue-မှီခိုဖက်ရှင်အတွက် (Volkow et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ dorsal striatum အလေ့အထသင်ယူမှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကို ထောက်. , ဒီအသင်းအဖွဲ့စွဲ၏နာတာရှည်ဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်အလေ့အထများ၏ခိုင်မာထင်ဟပ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒါကဖွဲ့စည်းကြောင်း DA-ဖြစ်ပေါ် conditional တုံ့ပြန်မှု, ပထမဦးဆုံးအလေ့အကငျြ့, ပြီးတော့ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, စွဲလမ်းအတွက်အခြေခံ neurobiological ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာ (ဤအေးစက်တုံ့ပြန်မှု DA လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိကြောင်း cortico-striatal glutamatergic လမ်းကြောင်းထဲမှာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ပါဝင်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်Vanderschuren နှင့် Everitt, 2005).
cue-သွေးဆောင် DA တိုးကင်းအတွက်မူလတန်းဒါမှမဟုတ် cue ရန်အလယ်တန်းတုံ့ပြန်မှုမကြာသေးခင်ကပုံရိပ်လေ့လာမှုဘာသာရပ်တစ်ခုကြိုးပမ်းမှု၌, cue နဲ့မရှိပဲ, (methylphenidate ၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့) DA ​​တိုးပွားလာ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်စွဲရောင်ပြန်ဟပ်မယ်ဆိုရင်အကဲဖြတ်ရန် သူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့် DA တိုးတဏှာသွေးဆောင်နိုင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်။ လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပါးစပ် methylphenidate-သွေးဆောင် DA တိုးနှင့် cue-ဆက်စပ်မတရားသော (အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ dissociation ထင်ရှားVolkow et al ။ , 2008) ထို cue-သွေးဆောင် DA တိုးအကြံပြုခြင်းမူလတန်း effectors မဟုတ်ပေမယ့်အစား DA ဆဲလ် DA လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိကြောင်း (cortico-striatal glutamatergic လမ်းကြောင်း၏မြစ်အောက်ပိုင်းဆွရောင်ပြန်ဟပ်; Kalivas နှင့် Volkow, 2005) ။ ဒီပါရာဒိုင်းအတွက်တဏှာသွေးဆောင် methylphenidate-သွေးဆောင် DA တိုး၏ကျရှုံးခြင်းဟာ DA တိုး၏နှေးကွေးသောသဘာဝအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ဘို့ဤလေ့လာရေးနောက်ထပ်, စွဲ circuitry အပေါ်သို့ DA ပစ်ခတ်မှုနှုန်း၏သိမ်မွေ့သက်ရောက်မှုထှနျးလငျးပေးပါ။ phasic DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်-အဖြစ် cue မှထိတွေ့မှုနှင့်အတူမတရားသော၏အောင်မြင်သောသော induction အခြေခံ-စခွေငျးငှါလမ်းကြောင်းကို-နည်းလမ်းတွေဆင်း၏ activation ရန်အလယ်တန်းတုံ့ပြန်မှုများကအစပျိုးအဖြစ်အခြားတစ်ဖက်တွင်အစာရှောင်ခြင်း DA အပြောင်းအလဲများကို။ ဒါဟာကြောင်း Martinez et al မီးမောင်းထိုးပြရကျိုးနပ်သည်။ သီးခြားပါရာဒိုင်း (အပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသောအခါ DA ကင်းချိုးဖောက်သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်တိုးနှင့်ငွေအပေါ်ကိုကင်းသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံတင်ပြMartinez et al ။ , 2007) ။ အကြောင်း, ပေးထားသောစိတ်ကြွဆေးတစ်ငွေကြေးဆိုင်ရာစစ်ကူကျော်ကိုကင်းကိုရွေးဖို့ကပိုဖွယ်ရှိမြားသောအခါအောက်ပိုင်း DA တိုးပြသခဲ့သည်သောဘာသာရပ်များဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများအတွက်သူတို့သည်လည်းကင်းချိုးဖောက်လျှော့ချ DA တိုးအစီရင်ခံသောကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒီဦးနှောက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအများဆုံးပြင်းထန်လျှောက်လျော့နည်းနဲ့ကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးညွှန်ပြနိုင်သည်အခြားစစ်ကူကျော်ကင်းရွေးချယ်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။
4 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှ DA နှင့်အားနည်းချက်
အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီကိုအခြားသူများထက်မူးယစ်ဆေးစွဲဖြစ်လာဖို့ပိုအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်နားလည်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသုတေသနအတွက်အများဆုံးစိန်ခေါ်မှုမေးခွန်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်နေဆဲပင်။ ကျန်းမာ Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကျနော်တို့က striatum အတွက် D2 DA အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေး methylphenidate ၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှု modulated ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သာယာသော (အဖြစ်မနှစ်မြို့ဖွယ်သောသူတို့အားဖော်ပြ methylphenidate နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ receptors ၏သိသိသာသာနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့အဖြစ်အတွေ့အကြုံဖော်ပြဘာသာရပ်များVolkow et al ။ , 1999, 2002c) ။ သိပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဖြစ်လာပေမည်နေချိန်မှာလည်းနည်းနည်းအားဖြည့်ဘို့ suboptimal ဖြစ်ပါသည်: ။ ဒီ DA အဆင့်ဆင့်နှင့်အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးတစ်ခု inverted ဦး-shaped ကွေးအောက်ပါအတိုင်းအကြံပြု ထို့ကြောင့်အမြင့်ဆုံး D2 DA အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ဘူး။ ဒီအတှကျပံ့ပိုးမှု NAc အတွက် D2 DA receptors ၏အဆင့်မြင့်သိသိသာသာယခင်က Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအရက်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အရက်စားသုံးမှုလျှော့ချကြောင်းပြသရာ preclinical လေ့လာမှုများ, (ပေးနေပါသည်Thanos et al ။ , 2001) နှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းမှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့-သျော cynomolgus မျောက်များ၏သဘောထားကို (မော်ဂန် et al ။ , 2002), နှင့်ကြားမှအရက်တစ်သိပ်သည်းမိသားစုသမိုင်းရှိခြင်းသူကိုဘာသာရပ်များအရက်သမားထိုကဲ့သို့သောမိသားစုသမိုင်းနဲ့မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီထက် striatum အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား D2 DA receptors ခဲ့ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းလက်တွေ့လေ့လာမှုများအားဖြင့် (Volkow et al ။ , 2006a) ။ ဤအဘာသာရပ်များအတွက်မြင့် D2 DA receptors, OFC နှင့် CG အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသူတို့ရဲ့ဇီဝြဖစ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ D2 DA receptors ၏မြင့်မား salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်တိုကျရိုကျဆားကစ်ပြောင်းလဲပစ်အားဖြင့်အရက်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အံ့သောငှါ postulate နိုင်ပါတယ်။
ယင်းရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးတွင်ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ADHD နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်စိတ်ဓာတ် dopamine လှုပ်ရှားမှုအထောက်အထားတွေ့ပြီ။ ချို့တဲ့ခြင်း (caudate အတွက်နှစ်ဦးစလုံး D2 DA receptors ၏အဆင့်နှင့် DA လွှတ်ပေးရေးမှာတှေ့မွငျရခဲ့ကြသည်Volkow et al ။ , 2007b) နှင့် ventral striatum အတွက် (Volkow et al ။ , 2007c) ။ နှင့်အညီ, လက်ရှိမော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျ DA phenotype (methylphenidate အကြိုက်၏ Self-အစီရင်ခံစာများအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Volkow et al ။ , 2007b) ။ တည်းကကုသမှုမရှိဘူး left လျှင်စိတ်ဝင်စားစရာ, ADHD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်အဘို့အမြင့်မားသောစွန့်စားမှုရှိElkins et al ။ , 2007).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စွဲလမ်းမမှန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအကြိမ်ကြိမ်ရှုလေ့လာခဲ့ကြ, ထိုသို့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုခြင်းအဆိုပါ preclinical သက်သေအထောက်အထားအတည်ပြုရန်နိုင်ခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါလိမ့်မယ် striatal DA စနစ်ကကွဲပြားခြားနားမှုမှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုကနေရလဒ်ရှိမရှိ prefrontal ဒေသများ (Koch et al ။ , 2007) ။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ (စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် striatal DA လွှတ်ပေးရန်၏လိင် dimorphic ပုံစံများမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြMunro et al ။ , 2006; Riccardi et al ။ , 2006) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဥစ်စာအလွဲသုံးစားမှုအားနည်းချက် impact နိုင်ကြောင်း, ဒေတာကဒီအချက်မှာယောက်ျားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေထက် သာ. ကြီးမြတ်သော DA တုံ့ပြန်မှုဖော်ပြရန်ရှိမရှိအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြတ်နိဂုံးချုပ်ခွင့်မရပေမယ့်။ ဒါဟာပုံစံများထိုကဲ့သို့သောရာသီစက်ဝန်း၏အခြေအနေတွင်, အသက်နှင့်ဇာတ်စင်အဖြစ်စမ်းသပ်အခြေအနေများ, မှအထိခိုက်မခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလည်းဖွယ်ရှိသည်။
ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါအဲဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်မကြာခဏစိတ်ရောဂါ comorbid စွမ်းပေါ်ပေါက်လာဖို့, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏လေ့လာတွေ့ရှိလိင် dimorphic ပုံစံများရန်, စွဲအားနည်းချက်ဖို့ striatal DA ရဲ့ system ကိုအလှူငွေသို့ဝေဖန်ထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
5 ။ ကုသမှုဂယက်ရိုက်
imaging လေ့လာမှုများလူသားတွေအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကို corroborated ခဲ့ကြပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် DA ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အစဉ်အလာအမြင်များတိုးချဲ့ပါပြီ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (က) ရှေးခယျြမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုလျော့ကျခြင်းနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားသင့်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကုသမှုများအတွက် multiprong မဟာဗျူဟာများအကြံပြု; (ခ) conditional မူးယစ်ဆေးအပြုအမူတွေကိုအားနည်းစေနှင့်, မူးယစ်ဆေးယူဖို့စိတ်ခွန်အားနိုး drive ကို; (ဂ) တိုကျရိုကျ inhibitory နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကိုခိုင်ခံ့စေ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဆှေးနှေးမပေးစိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန် (ထိန်းညှိ circuits များ၏အရေးပါပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်Koob နှင့် Le Moal, 1997) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏ interoceptive အမြင်များအတွက်တာဝန်ရှိသူတို့အား (မီးခိုးရောင်နှင့် Critchley, 2007), အရာကိုလည်းကုထုံးကြားဝင်များအတွက်အလားအလာပစ်မှတ်ဖြစ်ကြသည်။
Balster RL, Schuster CR ။ ကိုကင်းအားဖြည့်များ၏ Fixed-ကြားကာလအချိန်ဇယား: ဆေးထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပြုတ်ရည်ကြာချိန်။ ဂျေ Exp ။ စအို။ ပြုမူနေ။ 1973; 20: 119-129 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Barrett SP, Boileau ငါနည်းပညာအထောက်အကူပြု J ကို, Pihl ro, Dagher အေစီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်ရန် hedonic တုံ့ပြန်မှု positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် [11C] raclopride ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်လူ့ striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်မှအချိုးကျသည်။ synapses ။ 2004; 54: 65-71 ။ [PubMed]
et al Brody AL, Olmstead RE, လန်ဒန် ED ။ ဆေးလိပ်သောက်-သွေးဆောင် ventral striatum dopamine လွှတ်ပေးရန်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 161: 1211-1218 ။ [PubMed]
Chait ld ။ အားဖြည့်ခြင်းနှင့်လူသားတွေအတွက် methylphenidate ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 1994; 5: 281-288 ။ [PubMed]
Chang က L ကို, Alicata: D, Ernst T က, Volkow N. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်စိတ်ကြွဆေးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူဆက်စပ် striatum အတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို။ စွဲလမ်း။ 2007; 102 ပျော့ပျောင်း။ 1: 16-32 ။ [PubMed]
နေ့ JJ, Roitman MF, Wightman RM, Carelli RM ။ Associative သင်ယူမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ပြောင်းလဲနေသောဆိုင်း mediates ။ နတ်။ neuroscience ။ 2007; 10: 1020-1028 ။ [PubMed]
di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 1988; 85: 5274-5278 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Drevets WC, Gautier ကို C, စျေး JC, et al ။ လူ့ ventral striatum အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Euphoria ပီတိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 49: 81-96 ။ [PubMed]
Elkins IJ, McGue M က, Iacono WG ကို။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ, အကငျြ့ရောဂါနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအပေါ်လိင်၏အလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 64: 1145-1152 ။ [PubMed]
Ersche KD, ဖလက်ချာကို PC, Roiser JP, et al ။ methadone-ထိန်းသိမ်းထား opiate သုံးစွဲသူများဘိန်းဖြူအသုံးပြုသူများနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြားဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်း orbitofrontal activation အတွက်ကွာခြားချက်များ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2006; 188: 364-373 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fehr ကို C, Yakushev ငါ Hohmann N ကို, et al ။ အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူမြင်ကြကြောင်းအလားတူနီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူအနိမ့် striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု၏အသင်းမှ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 165: 507-514 ။ [PubMed]
မုဆိုး JS, Logan J ကို, ဝမ် GJ, Volkow ND ။ Monoamine oxidase နှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်။ Neurotoxicology ။ 2003; 24: 75-82 ။ [PubMed]
Galynker II ကို, Watras-Ganz S က, Miner, C, et al ။ methadone ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများ: opiatedependent ဘာသာရပ်များအတွက်နှောက်ဇီဝြဖစ်။ တောင် ဆိုင်းနိုင်းဂျေ Med ။ 2000; 67: 381-387 ။ [PubMed]
စတိန်း RZ, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 159: 1642-1652 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ dopamine စနစ်ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အရက်နှင့် psychostimulant တဏှာကိုနားလည်ဘို့က၎င်း၏ဂယက်၏လုပ်သူများ / phasic မော်ဒယ်။ စွဲလမ်း။ 2000; 95 ပျော့ပျောင်း။ 2: S119-S128 ။ [PubMed]
မီးခိုးရောင်နေ MA, Critchley HD ကို။ တဏှာမှ nteroceptive အခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007; 54: 183-186 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Heinz တစ်ဦးက, Siessmeier T က, Wrase J ကို, et al ။ dopamine: D (2) အကြားဆက်စပ်မှုဟာ ventral striatum နှင့်အရက်တွေကိုနှင့်တဏှာ၏ဗဟိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် receptors ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 161: 1783-1789 ။ [PubMed]
Heinz တစ်ဦးက, Siessmeier T က, Wrase J ကို, et al ။ တစ်ဦးပေါင်းစပ် [2F] DOPA နှင့် detoxified အရက်သမားလူနာ [3F] DMFP ပေလေ့လာမှု: striatal dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်နှင့် D18 / 18 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူအရက်တဏှာ၏ဆက်စပ်မှု။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1515-1520 ။ [PubMed]
Hemby SE, ဂျွန်ဆင် BA, Dworkin SI ။ မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ၏ Neurobiological အခြေခံ။ Philadelphia တွင်: Lippincott-Raven; 1997 ။
Hietala J ကိုအနောက်ကို C, Syvalahti အီး, et al ။ အရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် Vivo အတွက်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစညျး Striatal D2 dopamine အဲဒီ receptor ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 1994; 116: 285-290 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1403-1413 ။ [PubMed]
Kauer ဂျာ Malenka RC ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2007; 8: 844-858 ။ [PubMed]
Koch K ကို Pauly K ကို Kellermann T က, et al ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု: An fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychologia ။ 2007; 45: 2744-2754 ။ [PubMed]
အိပျ TP, Ahonen တစ်ဦးက, Torniainen P ကို, et al ။ Dopamine ပို့ဆောင်ရေးအရက်ဆုတ်ခွာပြီးနောက်လူ့ဦးနှောက်ကိုတိုးပွါး။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 4: 189-191 ။ 104-105 ။ [PubMed]
လျူ QS, ပူး, L, Poo MM ။ Vivo အတွက်ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းထိတွေ့ midbrain dopamine အာရုံခံအတွက် LTP သော induction နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သဘာဝ။ 2005; 437: 1027-1031 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လန်ဒန် ED, Cascella Ng, Wong က DF, et al ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာဂလူးကို့စအသုံးချ၏ကင်း-သွေးဆောင်လျော့ချရေး။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် [fluorine တို့ 18] သုံးပြီးတစ်ဦးကလေ့လာမှု -fluorodeoxyglucose ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1990; 47: 567-574 ။ [PubMed]
Malison RT ကို, အကောင်းဆုံး SE, ဗန် Dyck CH, et al ။ စူးရှသောကိုကင်း abstinence စဉ်အတွင်း elevated striatal dopamine ပို့ဆောင်ရေး [123I] beta ကို-cit SPECT ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 155: 832-834 ။ [PubMed]
Martinez: D, Broft တစ်ဦးက, Foltin RW, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုနှင့် striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု: ကင်း-ရှာအပြုအမူနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုး။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 1190-1202 ။ [PubMed]
Martinez: D, Gil R ကို, Slifstein M က, et al ။ အရက်မှီခိုအဆိုပါ ventral striatum အတွက်တုံး dopamine ဂီယာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 779-786 ။ [PubMed]
Martinez: D, Narendran R ကို, Foltin RW, et al ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်: သိသိသာသာကင်းမှီခိုနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့ရှေးခယျြမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 622-629 ။ [PubMed]
လူယာသည် SM ဒေါ် ND, မွန်တဂူ PR စနစ်။ မက်လုံးပေး salience များအတွက်ကွန်ပျူတာအလွှာဟာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2003; 26: 423-428 ။ [PubMed]
Montgomery AJ, Lingford-Hughes AR, Egerton တစ်ဦးက, Nutt DJ သမား, Grasby pm တွင်။ တစ်ဦးက [11C] raclopride ပေလေ့လာမှု: လူ striatal dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်နီကိုတင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ synapses ။ 2007; 61: 637-645 ။ [PubMed]
မော်ဂန်: D, Grant က ka, Gage, HD, et al ။ dopamine D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: မျောက်အတွက်လူမှုကြီးစိုး။ နတ်။ neuroscience ။ 2002; 5: 169-174 ။ [PubMed]
Munro, CA, McCaul ME, Wong က DF, et al ။ ကျန်းမာလူကြီးများအတွက် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 59: 966-974 ။ [PubMed]
Parasrampuria DA, Schoedel Ka, Schuller R ကို, et al ။ pharmacokinetics နှင့်လူသားတစ်မူထူးခြားတဲ့ပါးစပ် osmotic-controlled တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန် methylphenidate ရေးဆွဲရေး၏အလားအလာအလွဲသုံးစားနှင့်ဆက်စပ်သော pharmacodynamic သက်ရောက်မှု၏အကဲဖြတ်။ ဂျေ Clin ။ Pharmacol ။ 2007; 47: 1476-1488 ။ [PubMed]
ဖန် KL, အာမခံ T က, တေလာ SF, စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ Liberzon ဗြဲ Functional neuroanatomy: ပေနှင့် fMRI အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို Activation လေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်။ Neuroimage ။ 2002; 16: 331-348 ။ [PubMed]
Riccardi P ကို, Zald: D, et al လီ R ကို။ တစ်ပေလေ့လာမှု: striatal နှင့် extrastriatal ဒေသများတွင် [(18) က F] fallypride ၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ရွှေ့ပြောင်းခံရအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 163: 1639-1641 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် Kolb ခဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 ပျော့ပျောင်း။ 1: 33-46 ။ [PubMed]
Rolls ET ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex နဲ့ဆုလာဘ်။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 284-294 ။ [PubMed]
Rolls ET, Thorpe SJ, Boytim M က, Szabo ငါ Perrett ပစ။ အဆိုပါပြုမူနေမျောက်အတွက် striatal အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်ချက်။3။ iontophoretically ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပုံမှန်တုန့်ပြန်ပေါ် dopamine လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ neuroscience ။ 1984; 12: 1201-1212 ။ [PubMed]
Saxena က S နဲ့, Brody AL, Ho ML, et al ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါ vs obsessive-compulsive ရောဂါ paroxetine ကုသမှုနှင့်အတူနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများ Differential ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 59: 250-261 ။ [PubMed]
Schlaepfer TE, Pearlson GD, Wong က DF, Marenco S က, Dannals RF ။ လူ့ဘာသာရပ်များအတွက် dopamine receptors မှာသွေးကြောသွင်းကင်းနဲ့ [11C] raclopride အကြားယှဉ်ပြိုင်မှု၏ပေလေ့လာမှု။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 154: 1209-1213 ။ [PubMed]
Schuh LM, Schuh KJ, Henningfield je ။ ဆေးရွက်ကြီးမူတည်၏ Pharmacologic ပြဌာန်းခွင့်။ နံနက်။ ဂျေ Ther ။ 1996; 3: 335-341 ။ [PubMed]
Schultz W က, Tremblay L ကို, Hollerman JR ။ မျောက် orbitofrontal cortex နဲ့ Basal ganglia အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချ။ Cereb ။ cortex ။ 2000; 10: 272-284 ။ [PubMed]
SEVIS S က, et al Smith က GS, Ma Y ကို။ ဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူတိုင်းတာဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အတူငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်: D (2) / D ကို (3) အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2008; 197: 549-556 ။ [PubMed]
WW, Vansickel AR, Lile ဂျာ ​​Rush CR Stoops ။ acute ဃ-စိတ်ကြွဆေး pretreatment လူသားများတွင်လှုံ့ဆော် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2007; 87: 20-29 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Takahashi H ကို, Fujimura က Y ကို, Hayashi က M, et al ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်နီကိုတင်းအားဖြင့် Enhanced dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ်ကို double-မျက်စိကန်း Random, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol ။ 2007: 1-5 ။ [PubMed]
Thanos PK, Volkow ND, Freimuth P ကို, et al ။ dopamine D2 receptors ၏ Overexpression အရက် Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ဂျေ Neurochem ။ 2001; 78: 1094-1103 ။ [PubMed]
Tobler PN, O'Doherty JP, Dolan RJ, လူ့ဆုလာဘ်စနစ်များအတွက် coding အန္တရာယ်သဘောထားကို-related မသေချာမရေရာကနေကွဲပြား coding Schultz ဒဗလျူဆုကြေးတန်ဖိုး။ ဂျေ Neurophysiol ။ 2007; 97: 1621-1632 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 2005; 526: 77-88 ။ [PubMed]
Villemagne VL, Wong က DF, Yokoi က F, et al ။ GBR12909 [(11) ကို C] raclopride စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုတ်ရည်ပေ Scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် amphetamine- သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန် attenuates ။ synapses ။ 1999; 33: 268-273 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb ။ cortex ။ 2000; 10: 318-325 ။ [PubMed]
Volkow ND, Swanson JM ။ ADHD ရဲ့ကုသမှု methylphenidate ၏လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကိုထိခိုက်ကြောင်း Variables ကို။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160: 1909-1918 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, et al ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses ။ 1993; 14: 169-177 ။ [PubMed]
Volkow ND, Ding YS, မုဆိုး JS, et al ။ ကိုကင်းနှင့်တူ methylphenidate လား? လူ့ဦးနှောက်မှာသူတို့ရဲ့ pharmacokinetics နှင့်ဖြန့်ဖြူးအပေါ်လေ့လာရေး။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995; 52: 456-463 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS ။ "မြင့်မားတဲ့" နှင့် dopamine Transporter ထေိုသွေးဆောင် psychostimulant- အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 1996a; 93: 10388-10392 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS ။ ကိုကင်းလွှာမှ detoxified ကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးဦးနှောက်ထဲမှာလျော့နည်းသွားသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 1996b; 14: 159-168 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS ။ အရက်သမားအတွက် dopamine receptors အတွက်မဟုတ် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 1996c; 20: 1594-1598 ။ [PubMed]
Volkow ND, ရို B, Farde အယ်လ် Imaging ကအသက်ရှင်လူ့ဦးနှောက်: သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 1997a; 94: 2787-2788 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS ။ detoxified ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုန့်ပြန်လျော့သွားသည်။ သဘာဝ။ 1997b; 386: 830-833 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS ။ ဦးနှောက် dopamine D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်လူမှာ psychostimulants မှတုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်များ၏ခန့်မှန်းချက်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 1440-1443 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, Fischman မဂ္ဂါဝပ်။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာကိုကင်းသွေးဆောင် dopamine Transporter ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းကြောင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 2000; 67: 1507-1515 ။ [PubMed]
et al Volkow ND, Chang က L ကို, ဝမ် GJ ။ စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက် dopamine D2 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်: အ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်း။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001a; 158: 2015-2021 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ်, G, မုဆိုး JS ။ ပါးစပ် methylphenidate ၏ကုထုံးဆေးများသိသိသာသာလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ extracellular dopamine တိုးမြှင့်။ ဂျေ neuroscience ။ 2001b; 21: RC121 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, စတိန်း RZ ။ dopamine ၏အခန်းက္ပ, မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာတိုကျရိုကျ cortex နဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 2002a; 78: 610-624 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ၏အခန်းက္ပ: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကို။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 2002b; 13: 355-366 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS ။ ပွားလေ့လာမှု: ဦးနှောက် DA D2 receptors လူသားများတွင်စိတ်ကြွဆေး၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ synapses ။ 2002c; 46: 79-82 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, Maynard L ကို။ အရက်သမားအတွက် dopamine D2 receptors အပေါ်အရက် detoxification ၏ဆိုးကျိုးများ: တစ်ပဏာမလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2002d; 116: 163-172 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ အဆိုပါစွဲလူ့ဦးနှောက်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ ဂျေ Clin ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ 2003a; 111: 1444-1451 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Ma Y ကို, et al ။ မျှော်လင့်ထားသည့်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့်ကင်းချိုးဖောက်စိတ်ကြွဆေး၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2003b; 23: 11461-11468 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Ma Y ကို, et al ။ Orbital ၏ activation နှင့်ကိုကင်း-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် methylphenidate အားဖြင့် prefrontal cortex medial: စွဲမှဆီလျော်။ ဂျေ neuroscience ။ 2005; 25: 3932-3939 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Begleiter H ကို, et al ။ အရက်မိသားစုများ၏ထိခိုက်အင်္ဂါများ၌ dopamine D2 receptors ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်း: တတ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်အချက်များ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006a; 63: 999-1008 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Ma Y ကို, et al ။ methylphenidate ဖို့နဲ့ Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားဘာသာရပ်များအတွက်၎င်း၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖို့ဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မျှော်လင့်ထား၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuroimage ။ 2006b; 32: 1782-1792 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, Telang က F ။ dorsal striatum အတွက်ကိုကင်းတွေကိုနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာ၏ယန္တရား။ ဂျေ neuroscience ။ 2006c; 26: 6583-6588 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Swanson JM, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Telang အက်ဖ် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုဂယက်၏ရလဒ်များကို။ Arch ။ Neurol ။ 2007a; 64: 1575-1579 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, Newcorn J ကို။ caudate နှင့် attention- လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင် limbic ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ပဏာမသက်သေအထောက်အထားအတွက်စိတ်ဓာတ်ကျ dopamine လှုပ်ရှားမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007b; 64: 932-940 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, Newcorn J ကို။ ADHD နှင့်အတူကုသမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနုံလူကြီးများအတွက်ဦးနှောက် dopamine Transporter အဆင့်ဆင့်။ Neuroimage ။ 2007c; 34: 1182-1190 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, Telang က F ။ detoxified အရက်သမားအတွက် striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လေးနက်လျှောက်လျော့နည်း: ဖြစ်နိုင်သော orbitofrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2007d; 27: 12700-12706 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, Telang က F ။ သူတို့ကိုကင်းတွေကိုနှင့်အတူဒွန်တွဲနေကြသည်မဟုတ်လျှင် striatum အတွက် Dopamine တိုးကင်းချိုးဖောက်တဏှာထုတ်ယူကြပါဘူး။ Neuroimage ။ 2008; 39: 1266-1273 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝမ် GJ, Volkow ND, မုဆိုး JS, et al ။ naloxone-precipitated ဆုတ်ခွာမီနှင့်အပြီး opiate-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် Dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 1997; 16: 174-182 ။ [PubMed]
Williams က JM, Galli အေအဆိုပါ dopamine Transporter: psychostimulant အရေးယူများအတွက်နိုးနိုးကြားကြားနယ်စပ်ထိန်းချုပ်ရေး။ Handb ။ Exp ။ Pharmacol ။ 2006: 215-232 ။ [PubMed]
Williams က GV, Rolls ET, Leonard CM, အပြုမူနေဟာ Macaque ၏ ventral striatum အတွက် Stern ပာ C. အာရုံခံတုံ့ပြန်မှု။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1993; 55: 243-252 ။ [PubMed]
dopamine receptors Synaptic plasticity သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်ဝံပုလွေ ME, Mangiavacchi S ကို Sun, X တို့မှာယန္တရားများ။ အမ်း .. နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 2003; 1003: 241-249 ။ [PubMed]
Wong က DF, Kuwabara H ကို, Schretlen DJ သမား, et al ။ cue-ရူးနှမ်းကိုကင်းတဏှာစဉ်အတွင်းလူ့ striatum အတွက် dopamine receptors ၏ထေိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 2716-2727 ။ [PubMed]
ဝူ JC, ဘဲလ် K ကို Najafi တစ်ဦးက, et al ။ ကိုကင်းဆုတ်ခွာ၏တိုးမြှင့်ကြာချိန်နှင့်အတူ striatal 6-FDOPA လွှာမှလျော့ကျလာ။ Neuropsychopharmacology ။ 1997; 17: 402-409 ။ [PubMed]
ယန် YK, Yao အဘိဓါန် WJ, Yeh TL, et al ။ အထီးဆေးလိပ်သောက်-dual-အိုင်ဆိုတုပ် SPECT လေ့လာမှုမှာ dopamine Transporter ရရှိမှုလျော့နည်းသွားသည်။ prog Neuropsychopharmacol Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 32: 274-279 ။ [PubMed]
Zink CF, Pagnoni, G, မာတင် ME, Dhamala M က, Bern GS ။ အဓိက nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုမှလူ့ striatal တုံ့ပြန်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2003; 23: 8092-8097 ။ [PubMed]